China Water Spray Type Canned Food Sterilization Retort Manufacture and Factory |Shenlong
Water Spray Retort / Autoclave dia ny famafazana rano eny ambonin'ny fonosana vokatra mba hamindrana ny hafanana, ity karazana retort ity dia mety amin'ny kapoaka, tavoahangy vera, siny fitaratra, tavoahangy plastika, sakafo voatoto, sns.
1. Ny valin-teninay dia azo antoka:
Ny varavarana retort dia mifamatotra mba hiantohana ny famehezana ny varavarana.
Ny vatan'ny retort rehetra dia hita ao amin'ny efitranonay mba hahitana raha tsara ny lasantsy.
Miaraka amin'ny valva fiarovana, rehefa misy olana ny retort, dia afaka manokatra ny valva fiarovana amin'ny fanerena fanamaivanana.
2. Ny kojakoja elektrika dia Siemens sy Schneider mba hiantohana ny fizotry ny milina.
3. Fitaovana amin'ny hafanana mafana exchanger, ny rano dingana tsy mifandray amin'ny rano mangatsiaka sy ny etona amin'ny dingana manontolo mba hisorohana ny fahalotoan'ny sakafo faharoa.
4. Nampiasa rano fanodinana kely, mitahiry etona sy rano.
1. Amin'ny alàlan'ny mpanakalo hafanana ho an'ny fampangatsiahana, ny rano fanodinana dia tsy mifandray amin'ny rano mangatsiaka mandritra ny dingana manontolo mba hisorohana ny fandotoana faharoa amin'ny sakafo.Ary manafoana ny simika fanadiovana rano.Noho izany dia mahatratra ny fiantraikan'ny sterilization amin'ny mari-pana ambony ao anatin'ny fotoana fohy.
2. Ny rano firosoana kely dia afaka mivezivezy haingana mba hanafana haingana amin'ny fametrahana mari-pana sterilization.
3. Ny fanaraha-maso fanerena tonga lafatra dia miantoka ny fizotran'ny famokarana manontolo, ny overpressure dia ampiharina amin'ny fampifanarahana amin'ny fiovan'ny tsindry anatiny amin'ny fonosana vokatra, ka ny haavon'ny deformation ny fonosana vokatra dia kely indrindra.Izy io dia mety indrindra amin'ny fonosana entona sy tavoahangy fitaratra.
4. Ny rafitra fanaraha-maso SIEMENS mandroso sy marin-toerana dia miantoka fa ny mpanjifa dia afaka mahita ara-potoana ny rojo famatsiana eto amin'izao tontolo izao mba hampihenana ny fotoana fialan-tsasatra.
5.Stainless vy ambonin'ny retort vatana dia frosted mba hanatsarana ny haavon'ny hamafin'ny sy ny harafesiny fanoherana, indrindra fa ny fanoherana ny harafesina ny klôro ampiana amin'ny rano mangatsiaka.
6. Fanafanana haingana Misy rano mandehandeha kely miditra ao anaty vilany, ary ampiasaina ny mpanakalo hafanana avo lenta avy any ivelany.Ny fonosana dia afaka miakatra haingana avy amin'ny 20 degre ka hatramin'ny 121 degre ao anatin'ny 10-15 minitra.
7. Ny mari-pana ao amin'ny tank dia miorina ary ny fizarana hafanana dia mitovy.Ny rafitra famafazana rano mafana an'ny COSCO dia misy andiana nozzles eo amin'ny zorony efatra amin'ny lovia tsirairay ao amin'ny tanky fanodinana mba hahatonga ny rano mafana atomika hifandray tanteraka amin'ny vokatra, amin'izany dia miantoka fa ny fitaovana ao anaty fitaovana Ny mari-pana amin'ny teboka dia mitovy. .
8. Mitahiry angovo Ny rafitra fanarenana condensate etona dia afaka mamerina mivantana ny condensate vokarin'ny mpanakalo hafanana mandritra ny dingan'ny fanafanana ary mampiasa azy io ho rano mivezivezy amin'ny sterilization, ka mampihena ny fanjifana angovo.
9. Fanafanana ankolaka sy fampangatsiahana mba hisorohana ny fandotoana faharoa Ny rano mivezivezy dia mafana ankolaka na mangatsiaka amin'ny alàlan'ny mpanakalo hafanana.Ny rano mivezivezy ao anaty vilany dia ao anatin'ny toetry ny sterile mandritra ny hafanana na ny fampangatsiahana.Rehefa vita ny sterilization, dia tsy havela ny rano mitete eo amin'ny atin'ny vilany sy ny fonon'ny kitapo fonosana rehefa maina.Kely ny mizana fotsy, mangarahara sy madio ny kitapo feno fonosana, misoroka ny fandotoana faharoa.
MODELY 1200*3600 1500*5250
boky 4,5m3 10m3
Ny Retort/Autoclave dia azo namboarina araka ny takian'ny mpanjifa
Ny orinasanay dia nanomboka nanamboatra retort/autoclave tamin'ny taona 2004, manana traikefa mihoatra ny 10 taona izahay amin'ity sehatra ity.Noho izany, azonao itokisana ny kalitaonay sy ny ekipanay.
teo aloha: Sterilization amin'ny etona Autoclave Retort ho an'ny sardines sy tonelina sakafo retort
Manaraka: Autoclave asitrika rano mandeha ho azy ho an'ny indostrian'ny sakafo
Retort momba ny fanaterana labiera sy zava-pisotro
Autoclave Sterilization Retort sakafo
Fanaterana sakafo ho an'ny biby fiompy
Fanaterana indray amin'ny fanodinana sakafo
Fanaterana ny sakafo ao anaty kitapo Retort